ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ Facebook နှင့် Twitter တို့က စာမျက်နှာနှင့် အကောင့်မျာ? - Yangon Media Group
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ Facebook နှင့် Twitter တို့က စာမျက်နှာနှင့် အကောင့်မျာ?
ဒါကာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ရက်အနည်း ငယ်သာလိုတော့သည့်အချိန်တွင် အတိုက်အခံဆန့်ကျင်ရေးစာသားများတင်ခဲ့သည့် အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်နေသော သတင်းစာမျက်နှာအတုနှင့် အကောင့်များကို ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း Facebook နှင့် Twitter တို့က ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲသူသန်း ၃ဝ ရှိသော နာမည် အကျော်ကြားဆုံးလူမှုကွန်ရက်ဖြစ်သည့် Facebook က လွတ်လပ် သောသတင်းဌာနများဟု အယောင်ဆောင်ထားသော အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းစာမျက်နှာအတု ကိုးခုကို ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းစာမျက်နှာများနှင့်အတူ အကောင့်ခြောက်ခုကိုလည်း ဖြုတ်ချခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအကောင့်များသည်လည်း လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသည့်အပြုအမူများကို လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိထားရ ကြောင်း၊ ယင်းတို့ထဲမှ အကောင့်တစ်ခုတွင် Follower ၁၁၉ဝဝ ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ပြည်ထဲရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးများ အပါအဝင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်များက ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်နှောင်းပိုင်း မှတ်ချက်ပေးရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို တုံ့ပြန်ပြော ကြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
Facebook ၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးပေါ်လစီအကြီးအကဲနက် သာနီယယ်ဂလိုင်ချာက ”အဲဒီလိုမျိုးအပြုအမူမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မှားယွင်းစွာတင်ပြမှု မူဝါဒအောက်မှာ Facebook ပ်ါကနေ ခွင့်ပြု မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲဆိုတာ အခြားသူတွေကို ထင်ယောင်ထင် မှားဖြစ်စေဖို့ ကွန်ရက်ထဲမှာ အကောင့်တွေကိုဖန်တီးနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ မလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကြေညာချက်တစ်ခုထဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Twitter ကလည်း ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုကာ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် အကောင့် ၁၅ ခုကို အမျိုးအမည် ခွဲခြားပြီး ပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
သြစတြေးလျ၏ မိုးသီးမုန်တိုင်းကြောင့် ကပ်ဘေးဆိုးကြီး ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ထိုင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရှင်းကြောင်း ပြည်သူသို့ချပြရန်
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအချို့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုမရှိဘဲ အထက်နှင့်အောက် ဘော်လီဘော ပုတ်နေဟု ဝေဖန်
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပြစ်မှု ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ??
ပြင်ဦးလွင် ဝှက်ကား-ဒီးဒုတ် ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော အတွင်း ဒီးဒုတ်ရေတံခွန် ဆင်စခန်းဖွင့်